I-CORRY STREET RETREAT: Igumbi eliGreen Door - I-Airbnb
I-CORRY STREET RETREAT: Igumbi eliGreen Door
I-Corry Street Retreat yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla kubahambi abasebenzayo kunye nabahambi abadiniweyo ngokufanayo. Hamba okanye ukhwele ibhayisekile uye edolophini uyokuthenga okukhethekileyo, ukutya okumnandi, ukonwatyiswa okuphilayo kunye nabantu abaninzi ababukeleyo!
ICorry Street Retreat ibonelela ngamagumbi okulala ama-3 abucala ngalinye elinekhowudi yokutshixa kunye negumbi lokuhlambela elabelweyo ukuze ungabelani nezinye iindwendwe. Indawo ekwabelwana ngayo ibandakanya isicwangciso esivulekileyo sokuhlala kunye nendawo yekhitshi exhotywe ngokupheleleyo kwaye ilungile eneendawo zokuhlala ezininzi kunye nabo bonke ubutofotofo bekhaya. Ukuvumela imozulu, yonwabele indawo yethu yokutshisa umlilo emva kwendlu kunye netafile eneambrela yokuxhoma okanye yokutyela.
Iindwendwe zinesango labucala kwaye azabelani ngendawo nabanini abahlala kwisiza. Abanini bafuna ukufikelela kwiindawo eziqhelekileyo kunye neendawo ezibhalwe "Private" kwizinto eziluncedo, zokugcina kunye neofisi.
Esi sithuba sikulungele ukubaleka, abahambi ngezoshishino, ukuhlangana kwakhona, abakhweli/abakhweli beebhayisikile- nabani na othanda ukurhangqwa ziihektare ezingama-2000+ zendalo kwindawo eyodwa, ephumelelayo!
Olu luhlu lolweGumbi leGreen Door. Ukuba ungathanda ukugcina yonke indawo, bona uluhlu lwam lweCORRY STREET RETREAT: Isithuba sonke.
Ibhlokhi e-1 ukusuka kwiNdlela yeBhayisekile eLittle Miami Scenic, ½ imayile ukusuka eGlen Helen Nature Preserve, imayile enye ukusuka edolophini eYellow Springs, malunga. Iikhilomitha ezi-2 ukuya kwezi-4 ukusuka e-John Bryan State Park, eClifton Gorge kunye ne-Young's Jersey Dairy. Qhuba umgama omfutshane ukuya kwiWPAFB, iWright State University kunye neFairfield Commons Shopping area.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Yellow Springs